कम्प्युटरमा काम गर्दा आँखाको थकान कसरी हटाउने ? - Birgunj Sanjalकम्प्युटरमा काम गर्दा आँखाको थकान कसरी हटाउने ? - Birgunj Sanjalकम्प्युटरमा काम गर्दा आँखाको थकान कसरी हटाउने ? - Birgunj Sanjal
कम्प्युटरमा काम गर्दा आँखाको थकान कसरी हटाउने ?
१२ असार २०७८, शनिबार १७:१५
वीरगन्ज । लकडाउनका कारण अहिले आम मानिसहरूले अरू समय भन्दा बढी समय कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, टेलिभिजनमा बिताउन थालेका छन् । कार्यालय, स्कुलहरू नखुलेको कारण घर बाटै काम र पढ्ने काम भइरहेको छ । यस्तै घरबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने अवस्था रहेको कारण समय बिताउन पनि अधिकांशले यस्ता इलेकट्रोनिक साधनहरुनै बढी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
लगातार इलेकट्रोनिक उपकरणलाई हेर्दा आँखामा थकान देखिनु अहिले सामान्य जस्तै हुदैं गएको छ । तर आँखा रोगका विशेषज्ञहरूले निरन्तर यस्ता ग्याजेटको प्रयोग गर्नाले निकट भविष्यमा आँखा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
आँखालाई खतरा हुन्छ भनेर काम छोड्न पनि नमिल्ने अवस्था भएको कारण यस्ता उपकरणलाई घन्टौँ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले केही समय आँखालाई विश्राम दिएर विभिन्न कार्यहरू गर्नाले आँखालाई धेरै भार नपर्ने बताउँछन् । यसरी आँखाको थकानलाई कम गर्न केही घरेलु उपायहरू पनि रहेका छन् जसको मद्दतले लामो समय यस्ता किसिमका ग्याजेटमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दा आँखालाई धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ ।
चिसो पानीले आँखा धुने
लामो समय कम्प्युटर वा मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्दा आँखा दुख्ने र पोल्ने समस्या हुन्छ । यस्तो काम लगातार गरेर यदि तपाईँको आँखा पोल्ने र दुख्ने गरेको छ भने चिसो पानीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । लगातार काम गरिरहनु भएको छ भने केही समय कामलाई विश्राम दिएर फ्रिजमा राखेको वा सफा चिसो पानीलाई आँखामा छ्याप्ने गर्नुहोस् । यो कार्यले तपाईँको आँखा दुख्ने र पोल्ने समस्यालाई धेरै राहत दिन्छ । यसरी चिसो पानी आँखामा छ्याप्दा तपाईँलाई भएको मानसिक तनाव पनि केही कम हुन्छ ।
तुलसी र पुदिनाको पात
तपाई कम्प्युटर वा मोबाइलमा लामो समय काम गरिरहनु भएको छ भने अघिल्लो दिन तुलसी र पुदिनाको पातलाई सफा पानीमा भिजाएर राख्नु होस् । भोलि पल्ट कम्प्युटरमा लामो समय काम गरेपछिको विश्रामको समयमा उक्त पानीमा सफा कटनको कपडालाई भिजाउनु होस् । यसरी भिजाएको कपडाले आँखालाई छोपेर केही समय बस्नुहोस् । बेला बेलामा यो काम गर्नाले तपाईँको आँखा पोल्ने र आँखामा हुने थकानको समस्यालाई धेरै नै राहत दिन्छ ।
कम्प्युटर वा ल्यापटपमा घन्टौँ काम गर्दा तपाईँको आँखा पोल्ने वा थकान हुने समस्या छ भने गुलाब जलले पनि यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ । एक कचौरा सफा चिसो पानीमा थोरै गुलाब जल मिलाउनु होस् । उक्त घोललाई सफा कपडा वा कपासमा भिजाएर आँखामा ५ मिनेट राख्नुहोस् । यसरी घन्टौँ ग्याजेटमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने कामको विश्राममा तपाईँले यो कार्यलाई नियमित गर्नाले आँखामा हुने समस्यालाई धेरै कम गर्न सकिन्छ ।